Planetlibre.es — Manampy Ny Olona Hamaha Olana Ny Iphone, Mac Sy Ny Saim-Petsy Ny Fanampian'Ny Mora Ny Hahatakatra Lahatsoratra Sy Manam-Pahaizana Manohana Apple., Mey 2022
tsy afaka manavao fampiharana amin'ny iPad
maninona no maty haingana ny bateria iphone
inona ny podcast amin'ny iphone 5
iphone tsy manana andraikitra
Famerenana SiteGround: Haingam-pandeha, fiarovana, ary fanohanan'ny mpanjifa!
Manampahaizana manokana momba ny fampiantranoana web manadihady SiteGround, mpamatsy fampiantranoana lehibe ho an'ny vao manomboka. SiteGround dia manolotra fampiantranoana tranonkala haingana sy azo antoka miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa mahatalanjona!
Tsy handeha ny iPad-ko! Ho hitanao eto ny vahaolana mahomby!
Manazava ny zavatra tokony hatao ny manam-pahaizana Apple raha tsy hivadika ny iPad amin'ny alàlan'ny torolàlana famahana olana mora tohina.
iPhone Hotspot manokana tsy mandeha? Ity ny The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony tsy mandeha ny toerana mafana iPhone ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana tsikelikely.
Ny tambin-karaman'ny mpiasa any Amerika Na mandany ny andronao any amin'ny birao ianao na amin'ny tranobe fananganana, dia mety hampidi-doza izany
Ahoana no fomba fampiasako ireo rindranasa anaty hafatra ao amin'ny iPhone? Ny iOS 10 Guide.
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiseho aminao ny fomba fampiasana apps iMessage amin'ny iPhone, iPad, ary iPod, ary koa ny fomba fampidinana fampiharana vaovao ho an'ny Messages ao amin'ny iOS 10.
Horoscope fitiavana: tadiavo ny tantaram-pitiavanao miavaka
Io fanandroana io dia lasa malaza be, fanandroana, mihatra tanteraka amin'ny fiainam-pitiavanao koa.
Azonao atao ve ny manamboatra efijery iPhone tapaka? Ity ny Marina!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava izay tokony hatao amin'ny efijery iPhone vaky ary mampiseho aminao ny fomba fanamboarana azy io sy fanoloana faran'izay haingana.
Trano voaroaka, inona izany ary ahoana no vidiana azy ireo?
Trano voaroaka, inona izany ary ahoana no vidiana azy ireo? Ny fividianana trano amin'ny foreclosure dia mety ho orinasa lehibe.
Fandraisana amin'ny iPhone: Ahoana ny fampiasana azy ho toy ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny fidirana amin'ny iPhone noroahina ary asehony anao ny fomba fampiasanao azy ho toy ny fifehezana ho an'ny ray aman-dreny hamerana izay azon'ny zanakao atao amin'ny iPhone-nao.
Fanampian'ny governemanta hividy trano voalohany any Etazonia. Nanangona lisitry ny programa 8 izahay miaraka amin'ny fanampiana federaly hividianana ny tranonao
Ahoana no hanafoanana ny famandrihana amin'ny iPhone? Ity ny Marina!
Manoro anao ny manam-pahaizana Apple ny fomba hahitana sy hanafoanana ny famandrihana iPhone mba tsy ho voaloa ianao isaky ny volana!
Ny manam-pahaizana momba ny drafitra finday dia manazava ny antony tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny fampiharana My Verizon ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana mba hahafahanao miditra amin'ny kaontinao avy amin'ny iPhone-nao.
Avy amin'ny mpiasa Apple taloha, navaozina ho an'ny iOS 13: Ianaro ny tena antony maty tampoka ny batterinao iPhone ary inona marina no tokony hatao hanamboarana azy.
FaceTime tsy mandeha amin'ny iPhone-nao? Ity no antony sy ny vahaolana!
Nanazava ny manam-pahaizana Apple fa maninona ny FaceTime no tsy miasa amin'ny iPhone, iPad, iPod, na Mac anao, ary ny fomba hamaritana sy hamahana ilay olana.
Hitako foana ny fampandrenesana 'Tsy namboarina ny iPhone backup'! The Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony ahitanao fampandrenesana 'iPhone Backup Failed' ary asehony anao ny fomba anaovany izany.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny fomba fanovana ny ringtone amin'ny iPhone hahafahanao mametraka feo manokana hilalaovana rehefa mahazo antso, hafatra, ary fanairana hafa ianao.
Inona no dikan'ny hoe boo?
Ahoana no fomba hamelezako ny keyboard tokana amin'ny iPhone? The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiseho aminao ny fomba famadihana mora ny kitendry iray amin'ny iPhone amin'ny fampiharana rehetra izay mampiasa ny iPhone keyboard.
Ny teknolojia Apple taloha dia manazava ny antony mahatonga ny iPhone-nao miraikitra amin'ny logo Apple, ny fomba fanamboarana azy ary ny fomba hisorohana azy tsy hitranga intsony.